သင်ထည့်ဝင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ | FromLinux | ChrisADR Linux မှ
အားလုံးယနေ့မင်္ဂလာပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအောင်မြင်မှုများစွာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးပါပြီ။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုသေချာစဉ်းစားတွေးတောအောင်ချန်ထားခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်၏တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရလဒ်များကိုမင်းနှင့်အတူမျှဝေလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏စာတိုက်ပုံးထဲသို့မကြာခဏလာရောက်လာသောအီးမေးလ်များကိုသွယ်ဝိုက်။ တုန့်ပြန်ခြင်း 🙂
2 ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ် ဦး ထက်ပိုအစရှိသည်
ဒါကငါပြောနှင့်ပြီးသားတစ်ခုသို့ရာတွင်ဖြစ်ပါတယ် ပထမဆောင်းပါး, ဒါပေမယ့်ဒီနေ့အထိငါဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ငါ့လမ်းကြောင်းကိုအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ယူသောအချိန်လေးအတွက်ငါ့ကိုဆက်လက်ဆက်လက်။ ငါ့လက်ပ်တော့ပ်မှာပထမဆုံး Ubuntu ရှိရင်စာကြည့်တိုက်ထဲရောက်နေပြီးငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမွမ်းမံချင်တယ်၊ ငါတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး၊ ငါအဲဒီအချိန်မှာငါဘာကြောင့်လိုအပ်ရတာလဲမသိဘူး။ ငါတပ်ဆင်ချင်တာတစ်ခုခုရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ၎င်းသည်ထင်မြင်ယူဆရသောအခါ repositories တွင်မတွေ့ရပါ။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်စိတ်ပျက်မိကြောင်းနှင့်အဖြေကိုမတွေ့မချင်း google ရလဒ်စာရင်းများကိုဖြတ်သန်းသွားသောစိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုမှတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ် ဦး ထက်ပိုအစရှိသည်
Kali Linux အကြောင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလုံခြုံရေးအတွက်အံ့အားသင့်မိပါတယ်၊ ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များအတွက်သော့များကိုစာဝှက်ဖြည်ခြင်းအကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာကိုဖတ်မိပြီး၊ ငါစီရင်ချက်ချချိန်မှာဟက်ကာလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ john.
ကျွန်ုပ်၏ wifi ကဒ်၏အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ WEP ကွန်ယက်၏သော့ကိုရှာဖွေရန်ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုတွင်နာရီများကုန်လွန်သွားသည်။ ပုံမှန်သော့ချက်စာရင်းများ john သူတို့မှာအင်္ဂလိပ်လိုစာလုံးတွေသာရှိတယ်၊ ငါ့မြို့မှာသိပ်အသုံးဝင်မယ့်အရာမရှိဘူး၊ ငါနေတဲ့အနီးအနားမှာအများကြီးပဲ။
ပထမဆုံးဟက်ကာစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်၊ အဲဒါကတကယ့်ကိုစိန်ခေါ်မှုကြီးပဲ။ ပထမတော့အဲဒီအချိန်တုန်းကငါအင်္ဂလိပ်စာမဖတ်တတ်သေးတာဒုတိယ၊ ဒုတိယအရေးအကြီးဆုံးကတော့စာသားတစ်ကြောင်းချင်းစီကတရုတ်တွေနဲ့အချို့ရောနှောနေပုံရလို့ပါ။ ဂြိုလ်သားဘာသာစကား။ ဒီစာအုပ်ကဘာလဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့သူအားလုံးအတွက် ... အဖြေက ဒီမှာ 🙂
အဲ့ဒါကကျွန်တော့ရဲ့သင်ယူရေးလမ်းကြောင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ Kali Linux ကိုအဆင့်တိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာမသိဘဲမသုံးချင်ဘူးဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ပဲ။ nmap သို့မဟုတ် burp သို့မဟုတ်ပုံမှန်အားဖြင့်လာမယ့်တထောင်နှင့်အခြား tools များ။ ငါသိချင်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ် ဘာကွောငျ့ သူတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့် ဘယ်လို သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအခြိနျမှစ။ ငါ Kali ၏ tools များနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရပ်တန့်အကြောင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းစတင်ခဲ့သည် programming ဘာသာစကားများ.
တဖန်ငါတို့အရာအားလုံးဂြိုလ်သားသလိုပဲဘယ်မှာပထမ ဦး ဆုံးအခိုက်မှသွားလေ၏ 'ငါဆက်ဆက်ငါဖတ်ရှုခဲ့ရာ၏အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်ဘာမျှမနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း, တစ်ချိန်တည်းမှာသူကတတ်နိုင်သလောက်အင်တာနက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှထောင့်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုကိုက်စားခြင်း, ပေါ်နှင့်ပေါ်သွား၏ ... သိသာငါအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်အရင်းအမြစ်ရတဲ့စိုးရိမ်ခဲ့သည် ငါ့ကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဖြည့်ရန်။
အချိန်အနည်းငယ်ကုန်သွားပြီး Gentoo ကိုရောက်နေပြီ၊ များစွာသောအရာတွေအကြောင်းအရမ်းကိုသိချင်ခဲ့တယ်၊ နေ့တွေကြာလာတာနဲ့အမျှပြုစုခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးအကြောင်း၊ လုံခြုံရေးအကြောင်းနဲ့အရာများစွာအကြောင်းများစွာသင်ယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အစပိုင်းမှာတော့အရင်အတွေ့အကြုံတွေလိုပဲငါဟာနိုင်ငံခြားသားတရုတ်စာဖတ်နေတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ဒီနေ့ငါပထမပြင်ဆင်ချက်တွေ (တော်တော်လေးသေးငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို) ကို kernel အသိုင်းအဝိုင်းကိုစပို့လိုက်ပြီ၊ ဒါကရက်စက်တဲ့မှတ်ချက်တွေပေးတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်တယ်၊ ဒါက FOSS ကမ္ဘာမှာလေ့လာသူတွေအတွက်နေရာမဟုတ်ဘူး၊ အဘယ်အရာကိုလျှောက်ထားခဲ့သည်နှင့်အတူရွေးချယ်နှင့်ငါရှာဖွေတွေ့ရှိအရာကိုသိ? သင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိလျှင်, ထိုကဲ့သို့သောဘာမျှမ🙂
တစ်ခြားအချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူတစ် ဦး ၏အိမ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်အိမ်စည်းကမ်းများကိုလေးစားခြင်းအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသည့်အချက်မှာဤစည်းမျဉ်းများကိုလေ့လာရန်၊ git ကိုကောင်းစွာအသုံးပြုရန်၊ patch တစ်ခုကောင်းမွန်စွာပို့ရန်၊ ဆော့ဝဲလ်သုံးရန်ကျွန်ုပ်အချိန်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် တည်ငြိမ်သော code ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုအသေအချာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ရပ်ရွာနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း၊ vim အသုံးပြုတတ်ရန်လေ့လာခြင်း၊ C လေ့လာခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အစတွင်အရာအားလုံးသည်တရုတ်လူမျိုးများဟုထင်ရနိုင်သည်။ သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ပြီးတော့သင်ဘယ်လောက်အထိတိုးတက်လာတယ်၊
ယနေ့ငါစိတ်ကူးနိုင်သည့်ထက်စနစ်တစ်ခုကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ပိုမိုသော command များနှင့်နည်းလမ်းများကိုယနေ့ကျွန်ုပ်သိသည်။ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းအတာအထိအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျွမ်းကျင်စွာသင်ယူခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ထိုစာမျက်နှာများ (သို့မဟုတ် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသောအရာများ) ကိုယနေ့ငါဖတ်ရှုသည်။ ငါလမ်းပျောက်နေတယ် ...
ငါမနက်ဖြန်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ငါလေ့လာချင်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်၊ နည်းပညာအသစ်တွေလိုချင်တယ်၊ ဘာသာစကားအသစ်တွေသင်ချင်တယ်၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအသစ်တွေဆောက်ချင်တယ်၊ လူတွေအများကြီးသင်ချင်တယ်၊ ကျွန်ုပ်၏နည်းပညာရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ပထမအဆင့်တိုင်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်မည်သည့်အရာကိုမျှနားလည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤမျှလောက်စကားလုံးများစွာဖြင့်ဤအရာကိုရယူလိုခဲ့သည်၊ နှစ်သိမ့်ဇုန်ဤအချက်သည်၎င်းတို့အားကျွမ်းကျင်သည်ဟုယုံကြည်သူအားလုံးရောက်ရှိလာသည့်နေရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သင်၏သခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ရုံဖြင့်သင်မှားကြောင်းတွေ့ရှိရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်နှင့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ပထမတော့သင်နားလည်ချင်မှနားလည်မယ်၊ မှားတယ်၊ လက်သုတ်ပုဝါကိုတောင်ချင်ချင်ပေမယ်သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ဇုန်ကိုဘယ်တော့မှရောက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ရင်၊
ငါထင်မြင်ချက်သေးသေးလေးကြောင့်ဒီဟာကိုငါထားခဲ့တယ်။ ငါတကယ်သိတာထက်ပိုသိတယ်လို့မင်းကိုမထင်စေချင်ဘူး၊ ငါလေ့လာခဲ့တဲ့နည်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်သိမ့်မှုဇုန်မှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ကိုငါကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့လို့ပဲ ကျွန်ုပ်သည်ခေါင်းစဉ်တစ်ခု master ကျွမ်းကျင်သည်ဟုယုံကြည်ရန်နှင့်စီမံကိန်းသို့မဟုတ်ရပ်ရွာတွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ပူးပေါင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်မည်ဟုငါ့ကိုမေးမြန်းသူများအတွက်အဖြေမှာရှင်းပါသည်။
စွန့်စားမှုအများစုသည်အရာဝတ္ထုများကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကအရာအားလုံးကိုသိပြီးကျွမ်းကျင်လျှင်၊ အရာရာတိုင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှုံးသည် - ထို့ကြောင့် GNU / Linux အကြောင်းလေ့လာခြင်းကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်၊ အကြောင်းမှာယင်းသည်အဆုံးသတ်ပုံမရသည့်ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ဟာကြီးထွားလာခြင်းမရှိဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတူပင်တာ ၀ န်ကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုမြှင့်တင်နိုင်ခြင်းမှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းမရှိဘဲတာ ၀ န်တစ်ခုကိုသင်လုပ်နိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်။aနေ့စဉ်သင်ယူခြင်းကိုများစွာပြုလုပ်သည်။ here ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေသူများအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နှစ်သိမ့်ဇုန်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အခြား » သင်ထည့်ဝင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
Excellent က, မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အတူသင်ခန်းစာအများကြီးရှိတယ်
ဟိုင်းဒီယို၊ မျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏ကြင်နာသောစကားများအတွက်ကျေးဇူးပါ။ 🙂ကျွန်ုပ်သည်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများကိုပေးပို့ရန်သင်ယူခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်အနည်းငယ်ကိုရေးရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မတိုင်မီတောင်းဆိုချက်နှစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ငါ၏အဗန်းထဲမှာအီးမေးလ်တစ်စုံဖတ်ပြီးနောက်, 🙂နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူသား၊ ငါ post ကိုတကယ်သဘောကျတယ်။ အဲဒါက Linux မှာရှိတဲ့ငါ့ရဲ့နိယာမတွေကိုသတိရစေခဲ့တယ်။ * * (
Lucas ကို Hahaha ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီ GNU / Linux မှာကျွန်တော်တို့အိုလာပြီဆိုတာပြပေမယ့် ၂ နှစ် ၃ နှစ်အတွင်းမှာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်။ လွမ်းဆွတ်မှုကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ရအောင်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Linux အသစ်နှင့်စတင်ခဲ့သကဲ့သို့ sistribucionbde linux စတင်နိုင်ခြင်းနှင့်အတူအရာအားလုံးသည်ထူးဆန်းပုံရသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း၏ kaliali manual အချို့ရှိပါသည်။
မင်္ဂလာပါ arling၊ GNU / Linux ကိုကြိုဆိုပါ။ သေချာတာကတော့အစပိုင်းမှာအရာရာတိုင်းဟာထူးဆန်းနေပုံရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအကြံပေးနိုင်တာကသင်ဟာအရာ (၂) ခုဖြစ်ချင်တယ်၊ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း၊ ဘာသာရပ်များစွာ၏ရံဖန်ရံခါမတ်စောက်သောသင်ကြားမှုလမ်းကြောင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
Kali ကတော့…အခုသင်စတင်အသုံးပြုဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ အထူးသဖြင့်သင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီး Kali ရဲ့ကိရိယာတော်တော်များများဟာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်၊ တချို့ကမင်းကိုတောင်ထောင်ထဲပို့နိူင်တယ်၊ ဒါကြောင့်အရေးမကြီးဘူး။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်ရန်၊ အခြေစိုက်စခန်းများကိုအရင်ပြင်ဆင်ပါ။ အချိန်နှင့်အမျှသင်အမြဲတမ်းထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်စမ်းသပ်မှုစတင်နိုင်သည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မျှဝေပေးတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်၊ အကယ်လို့အင်တာနက်ပေါ်မှာကျွန်တော်အနည်းငယ်စစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့သိပ်မကောင်းဘူးဆိုရင် Github (သို့) Gitlab အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောချင်တာကိုခင်ဗျားသိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူပရောဂျက်များတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ခြင်း၊ Github Pages နှင့်အခြားစာမျက်နှာများအကြားစာမျက်နှာများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ ကောင်းပြီ။ Lima ဆီမှသတင်းအချက်အလက်ထပ်မံထည့်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ပီရူး၊ ခွန်အားများစွာရှိသည်။ သင်အလွန်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်၊ ငါ # vision နှင့် # impetus
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ဆောင်းပါးအတွက်စိတ်ထဲထားမယ်၊ နောက်ဆောင်းပါးတွေမှာ Git အကြောင်းပြောနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးပုံရပေမယ့်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး
iPatch - အနာဂတ်ကိုကုန်သွယ်ခြင်းသည်လက်ရှိနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်